Ajeechaa Haacaaluu – ibsi haadha alangaa ‘shakkii uume’ |
Home Afaan Oromoo Ajeechaa Haacaaluu – ibsi haadha alangaa ‘shakkii uume’
(BBC Afaan Oromoo) — Ajjeechaa Haacaaluu hundeessaa namooti kallattiin raawwataniiru jedhaman to’annoo jala ooluu fi ajjeechaa raawwachuu amanuu isaanii ibsi haati alangaa Aadde Adaanech Abeebee kennan kanneen ija shakkiin ilaalan jiru.
Battala ibsi sun kennametti namoonni marsaalee hawaasaa irratti yaada isaanii barreessan hedduun ‘diraamaa’ jechuun ibsan.
Qorannoo yakkaa gara garaa mootummaan Itophiyaa taasisaa jiru irratti keessumaa lammiilee biyya alaa jiraatanin qeeqni akkanaa yoo dhihaatu kuni kan duraa miti.
Ogeessi seeraa dubbifne adeemsa qorannoo taasifame qeeqeera.
Ibsichi maal jedha?
Namoota ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa irratti kallattiin qooda fudhatan sadi keessaa lama to’annoo jala oolaniiru jedhan Haati Alangaa Federaalaa Adaanech Abeebee.
Namoota sadi ajjeechaa Haacaaluu irratti kallattiin hirmaatan jedhanii fi garee namoota kana duuba jira jedhanis maqaa dhahaniiru.
Haaluma kanaan namoonni ajjeechaa Haacaaluu raawwataniiru jedhaman Xilaahun Yaamii fi Abdii Alamaayyoo to’annaa jala ooluun himameera.
Namni sadaffaan Kabbadaa Gammachuu jedhamu ammoo barbaadamaa kan ture booda to’atamuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru.
‘Haacaaluu waliin ‘lubbuun keenya tokko,’ duuti isaa hedduu na hubde’
”Haacaaluun gaafan du’u Ambotti na awwaalaa jedhee ture”
‘Haacaaluu eenyutu ajjeese, ajjeesise kan jedhu hidda qaba waan ta’eef yakka cimaadha’
Akka Haati Alangaa Adaanech jedhanitti, artiist Haacaaluu Hundeessaa rasaasa dhukaasee kan ajjeese Xilaahun Yaamii nama jedhamu yoo ta’u, magaalaa Finfinnee naannoo Galaan akka jiraatu himameera.
Abdii Alamaayyoo fi Kabbadaa Gammachuu ammoo ajjeechaa kana keessaa kallattiin qooda qabu jedhame.
Namootni sadan garee ‘Shanee’ jedhamurraa ergama fudhatanii ajjeechaa kana raawwachuus himaniiru.
Namoonni lamaan to’annoo jala oolan wayita qorataman jecha kennaniin yeroo gara garaa miseensota garee ‘Shanee’ jedhamu kanaan wal arganii ajjeechaa kana raawwachuuf waliigaluu isaanii himaniiru jedhan Aadde Adaanech.
Namoonni kunneen jecha kennaniin miseensonni garee ‘Shanee’ ergamicha isaaniif kennan isaanitti Afaan Oromoo, walitti ammoo Afaan Tigree haasa’u ture jechuu isaanii Aadde Adaanech himaniiru.
Ergama kana akka raawwataniif jecha sababni itti himameef ”Mootummaan federaalaa dadhabuun gara jiguutti waan adeemaa jiruuf, gara rakkoo caalutti akka hin galleef jedhanii sossoban,” jedha ibsichi.
Namni isaan ajjeesan dursee akka itti hin himamneefi maqaan tarreeffamee akka kennamuuf qofa akka itti himame namoonni kunneen dubbataniiru jedhan.
Namoonni kunneen eeruu jiraattonni naannoo Galaan kennaniin to’atamuus himaniiru.
Maaltu shakkii uume?
Haati Alangaa Federaalaa wayita ibsa kennaa turanitti maqaa nama kallattiin dhukaasee ajjeesee wayita dogoggoranii namni biraa isaan sirreessu dhagaahamuun fayyadamtoota marsaalee hawaasaa hedduu biratti ijoo dubbii ta’eera.
Kanneen viidiyoo kana waliif qoodaa qorannoo taasifame irratti shakkii qabaachuu isaanii ibsanis jiru.
Namoota dhimma kanarratti shakkii isaanii ibsatan keessaa tokko kan ta’e ogeessi seeraa Ameerikaa Minisootaa jiraatu Bahaar Omaar, amanamummaan ibsa haadha alangaa shakkisiisaadha jedha.
Ibsi amma haati alangaa kennan ibsa amma dura poolisiin kennaa ture waliin waan wal darbu qab jedha Bahaar.
Namooti amma dura shakkamanii to’atamanii fi kan amma haati alangaa himan gargari jedha.
Ibsi kenname garee siyaasaa tokko itiin maqaa balleessuuf waan kaayyeffate fakkaata jedhe.
Osoo qorannoon gahaan hin taasifamiin aanga’oonni mootummaa dursanii garee amma ajjeechaa kana duuba jira jedhametti quba qabuu eegaluun isaanii kanaaf ragaadha jedha.
Gama biraan, namoonni ergama kennan ‘ABO-Shanee’ erga jedhaniin booda ‘ABO-Shanee’ sun Afaan Tigree dubbatti jechuun waan nama shakkisiisu jedhan.
Dabalataan ammoo Haacaaluu Hundeessaa yeroo gara garaa yaaliin ajjeechaa isarra gahaa akka ture himee, qaama isa sodaachisaa turellee akeekee jira jedha Bahaar.
Yakka akkanaa yoo qorattu bakka ragaan qabatamaan hin jirretti, ‘circumstantial evidence’ ykn ammoo ragaa al kallattii laalta kan jedhu ogeessi seeraa kun, qorannoon silaa qaamoleen Haacaaluun himate irratti fuulleffachuu qaba ture jedha.
Wantoonni kunneen qorannaan kun murtii siyaasaaf uwwisa seeraa kennuudhaaf godhame akka ta’e agarsiisa yaada jedhu qaba.
Mootummaan yakka raawwatame sirnaan qoratee haqa argamsiisuuf ykn dandeettii ykn ammoo fedhii akka hin qabne agarsiisa jedha.
Artiist Haacaaluu Hundeessaa Waxabajjii 29 ture konkolaataa isaa keessatti kan ajjeefame.
Ergasii hokkora uumameen namoonni 177 yoo du’an, 4,700 ol hidhamaniiru.
Previous article‘Please, we’re bleeding’: Protesters decry violent unrest in Ethiopia
Next articleUNREST IN ETHIOPIA RESULTS IN DEATHS AND ARRESTS